Go’aankii lagu joojiyay duulimaadyadii caalamiga ahaa oo. – Kismaayo24 News Agency
by admin 19th March 2020 094
Go’aankii dhowaan ka soo baxay Wasaaradda Gaadiidka iyo duulista Hawada ee Xukuumadda Soomaaliya oo ahaa in dhammaan duulimaadyada caalamiga ee yimaada Soomaaliya la joojinayo ayaa maanta si rasmi ah u dhaqan galay.
Illaa iyo hadda ma jiro wax diyaarado caalami ah oo saaka ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan cadde oo maalin walba ay soo caga dhigan jireen diyaarado ka yimaada dalal kala duwan.
Go’aankan ayaa dhigaya in muddo 15 cisho ah aanay wax diyaarado caalami ah dalka imaan doonin, sababo la xiriira ka hortagga cudurka Coronavirus oo adduunka ku faafay, kaasoo ay kumanaan ruux u dhinteen, tiro kalena la il daran yihiin.
Inkastoo dowladdu ay joojisay duulimaadyada caalamiga ah, hadana waxaa shaqeynaya diyaaradaha gudaha ee isaga kala goosha gobolada dalka.
Go’aanka lagu joojiyay diyaaradaha ayaa saameyn doona diyaaradaha qaadka ee ka yimaada dalka Kenya.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay waqti badan gelineysa sida looga hortegi karo cudurka Coronavirus oo dalal badan saameyn ku yeeshay, iyadoo illaa hadda Soomaaliya laga helay hal kiis oo ah muwaadin Soomaali ka yimid dalka Shiinaha.
Sawirro: Madaxweyne Farmaajo Oo Guddoomiyay Shirka Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya
admin 18th October 2018 18th October 2018